अबको पाँच वर्षमा मधेशले विकासको लय समातिसक्ने छ :विद्यायक संजय कुमार यादव -
अबको पाँच वर्षमा मधेशले विकासको लय समातिसक्ने छ :विद्यायक संजय कुमार यादव
८ पुष २०७४, शनिबार ११:४७ 2255 पटक हेरिएको
संघिय समाजवादी फोरमका प्रदेश नं. २ को सर्लाही जिल्लाको क्षेत्र नं. ३ को ‘ख’ बाट निर्वाचित विद्यायक संजय कुमार यादव जनअधिकार फोरम नेपालको युवा केन्द्रीय अध्यक्ष तिनपार्टी एकिकरण पछि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा युवा इन्र्चाज भएरकाम गरीसकेका छन् । सण्डे खवरले उनीसंग गरेको संक्षिप्त कुराकानी
कस्तो रहयो त चुनावी अनुभव ?
चुनावी अनुभव राम्रो रहयो किन कि विगत भन्दा अहिले जनता जागरुक भएको अवस्था देखियो । अधिकार र भविश्य भोटबाट बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिलेको जनतामा यो बुझाई रहेको मैले पाँए । भोटको प्याटनले पनि यस्तो देखाएको मेरो बुझाई छ ।
प्रदेश नं. २ को ठूलो दलको भएको नाताले सरकार बनाउने तयारी हुदै होला कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
जनताको चाहाना अनुसार नै अब बन्ने सरकार हुन्छ । हामी यो सरकारको नेतृत्व लिए पनि राजपा सरकारको मुख्य भूमिका मै हुन्छ । हामी र राजपा मिलेर यो सरकार निर्वाण हुन्छ ।
त्यसो भए अरु दल यो सरकारमा सहभागिता हुदैन् ?
यो जनताको चाहाना होईन भन्ने त देखियो नि ।
मधेसमा तपाईहरुले भने जस्तै मधेस सरकार बनाउदै हुनुहुन्छ । यो क्षेत्रको विकासको लागि के योजना छ ?
हो यो ऐतिहासिक अवसर पाहेको छ मधेसले, आपनो पहिचानको नाम,सरकार आदि बनाउने । जुन विश्वासकासाथ मधेसका जनताले हामीलाई भोट दिएर उनीहरुले आपनो भविश्य उज्जल पाउने विश्वास लिनु भएको छ । हामी निरन्तर अहोरात खटेर २४ सै घण्टा खटेर त्यो ठाँउको, त्यहाँका जनताको जीवनमा परिर्वन ल्याउने छौं । यो ठाँउ साचै नै जर्जर बर्बर छ । हिजोसम्म राज्यले जसरी दोहन र शोषणमात्र गरी छोडी दिएको अवस्था छ । त्यो अवस्थाबाट समुनत, समृद्ध र विकसीत अवस्थमा ल्याउनको लागि हामीले योजना बनाएर जाने छौं । मधेशको लाइफ लाइन भनेको हुलाकी राजमार्ग हो । यो हाम्रो कार्यकालमा पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म पुरा गर्ने । अनि यो क्षेत्र भनेको दश कै भोक मेटाउन सक्ने प्रदेशपनि हो । त्यसैले यो क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्ने । किसानलाई उचित सहयोग गर्ने । कृषी वजार व्यवस्थापन सरकाले नै गर्नु पर्छ । विगत जस्तो यहाँका जनतालाई कर र मतको लागि मात्र उपयोग नगरी उनीहरुले तिरेको करलाई सही सधुपयोग गरी शिक्षा,स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताहरुमा यो सरकारले आमुल परिवर्तन गर्ने छ । तपाई मार्फत सम्पुर्ण जनताहरुलाई यो विश्वास दिलाउन चाहान्छु कि अबको ५ वर्ष विकासीत मधेस हेर्न पाउनु हुनेछ ।
शहरी विकासमन्त्रीको यस्तो उद्घोष-“अब
परम्परागत शैलीको काम गराइले